ब्लगमा नितान्त ब्यक्तिगत कुरा मात्र राख्नेले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखेकी छैन : पवित्रा केसी - MeroReport
ब्लगमा नितान्त ब्यक्तिगत कुरा मात्र राख्नेले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखेकी छैन : पवित्रा केसी
पवित्रा केसीलाई लेखन र अध्ययनमा एकदमै रुची छ । उनलाई नृत्य गर्न र भ्रमण गर्न पनि उत्तिकै मन पर्छ । ९ वर्षअघि मोफसलदेखि रेडियो पत्रकारिताबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी पवित्रा अहिले भने भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (NSET-Nepal) मा कार्यरत छिन् । सोसल मिडियामा समेत उत्तिकै सक्रिय पवित्रा ब्लग लेखनमा पनि सक्रिय छिन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै पवित्रा केसीलाई प्रस्तुत गरेका छौ। प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
आफुलाई चिनाउनकै लागि भनेर सोसल मिडिया प्रयोग गरेको खासै होइन । सोसल मिडिया बाहिर मलाई नजिकबाट जस्ले जसरी चिन्छन् त्यही नै हो मेरो जिन्दगीको वास्तविक परिचय ।
सन् २०११ देखि सुरु गरेकी हुँ । कुनै उद्देश्य लिएर शुरु गरेकी थिइन र अहिले पनि खास उद्देश्य केही छैन । जसरी सामाजिक संजालका अरु क्षेत्र जस्तो ट्विटर, फेसबुक आदि खोलिन्छ त्यस्तै नै हो ब्लग पनि । पहिले पहिले मनमा लागेका कुरा, यस्सो संयोगले फुरेका कविताका अंश होस् या कथा कुथुंग्री डायरीमा लेखेर राख्ने गरिन्थ्यो । अहिले डायरीको ठाँउ ब्लगले लिएको मात्र हो मेरो लागि ।
केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ र कस्ता विषयवस्तु तपाईको रोजाईमा पर्छन?
आफ्ना मनका भावनाहरुलाई कथा, कविता र गजलको रुप दिन्छु अनि ति रचनाहरुलाई सुरक्षित होस भन्नको लागि ब्लगमा सेयर गर्छु । पहिले पहिले ब्लग नहुँदा रचनाहरु डायरीमा सिमित हुन्थे । कहिलेकाहि मौका पर्दा वाचन गरिन्थ्यो भने अहिले इन्टरनेटको दुनियाँ फस्टाएको कारण एकैपटकमा धेरैले आफ्नो पायक पर्ने समयमा पढ्न पाउँछन् ।ब्लगमा कुनै कुरा पोस्ट गरिसकेपछि डायरी हरायो भने पनि कुनै चिन्ताको कुरा हुन्न । सामान्य जीवन भोगाईका कुराहरु नै मेरो रचनाका बिषयवस्तु बन्ने गर्दछन् । जस्तै : मायाप्रेम, रोमान्चकता, आँशु, खुसी, स्वतन्त्रता, अधिकार र लैंगिकताका कुराहरु प्राय: मेरो रोजाईका बिषय हुन् ।
तपाईको ब्लग http://pavikc.blogspot.com/ मात्रै कि यस बाहेक अरु पनि चलाउनुहुन्छ ?
मैले चलाउने ब्लग यहि एउटा मात्र हो ।
ब्लगिङ गर्न गारो र सजिलो भन्ने कुरा ब्लगिङ गर्ने बिषयमा भरपर्छ । नितान्त आफ्नो विचार, रचनाहरुलाई ब्लगिङ गर्ने हो भने खासै गारो छैन तर सबैको चासो र केन्द्रको बिषयमा ब्लगिङ गर्दा वा संवेदनशिल बिषयमा ब्लगिङ गर्दा भने अलि बढि मेहेनत गर्नुपर्ने र सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मेरो ब्लगमा प्राय: हरेक प्रकारका भावनाहरु छन् । मातृत्व, साथित्व, प्रेम, धोका, मिलन, रोमान्स, अभाव, गरिबी, स्वतन्त्रता, अधिकार र लैंगिकताका कुराहरु समेटिएका रचनाहरु भेटिन्छन् । पाठकहरु प्रायले पढेर सकारात्मक र आफ्नो जीवनघट्नासँग मेल खाएको प्रतिकृया दिन्छन् । लेखनलाई निरन्तरता दिन र अझै मेहेनत गर्न सुझाव दिन्छन् भने केहिले नेपाली मात्र नभएर अंग्रेजीमा पनि लेख्न सुझाव दिने गर्छन् ।
आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न अहिले युवाहरुले ब्लगिङ्गप्रति आर्कषित भई रहेका छन । नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोग ?अनि कस्तो देख्नु हुन्छ ब्लगिङ्गको भविष्य ?
दुरुपयोगकै कुरा गर्ने हो भने दुरुपयोग नभएको क्षेत्र कुन नै छ र ! भात खाने चामल दुरुपयोग गरेर रक्सी बनाउछन्, खोकीको औषधी दुरुपयोग गरेर लागु औषधको रुपमा समेत प्रयोग गर्छन् । दुइचार जनाले दुइचार कुरा लेख्दा दुरुपयोग गरे भन्दैमा ब्लगको दुरुपयोग भएको छ जस्तो लाग्दैन । सामाजिक सवालका धेरैका ब्यक्तिगत विचार, मुलधारमा अट्न नसेका समाचारदेखि लिएर मनका अनेक वेग होस या साहित्यको लागि, ब्लग राम्रो स्थान बनेको छ । डिजिटल मिडिया क्षेत्रको सहि प्रयोग र सहि अवसर ब्लग हो जस्तो लाग्छ ।
हरेक कुरामा सुरुमै विकृति सहित आउँदैन । प्रयोग हुँदै जाँदा हरेक बस्तुको सकारात्मक र नकारात्मक क्षेत्र छुट्टिँदै जाने हो । ब्लगमा केही विकृति नभएका त हैनन् । ब्लगिङको विकास भएको छोटो समयमै देखिएका सकारात्मकसँगै नकारात्मक कुराको विकास हुँदै गरेकोले, धान खेतमा अनावश्यक झार गोडमेल गरे जस्तै बिस्तारै यस्को प्रयोगको परिधि या उद्देश्य अनुसार आचारसंहिता आवश्यक नै छ ।
नितान्त ब्यक्तिगत रुपमा आफ्ना कुरा मात्र राख्नेले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खासै देखेकी छैन ।
मेरा मागहरु शिर्षक गरेको गजल अधिकांश महिला मित्रहरुले मन पराउनुभएको गजल हो । जुन गजल “आफ्नो प्रेमी र श्रीमानको जन्मदिन, एनिभर्सरी जस्ता दिनमा मैले पढेर सुनाएँ” भन्ने जस्ता अनुभव महिला मित्रहरुले मसँग सेयर गर्नुभएको थियो ।
हिलो माटोलाई तपाईँ के भन्न रुचाउनुहुन्छ? मुर्तिकारलाई दियो भने मुर्ती बनाउला, डकर्मीलाई दियो भने पर्खाला बनाउला, कुमालेलाई दियो भने भाँडा बनाउला.. र कुनै पागललाई दियो भने उल्टै त्यै हिलो हाम्रै मुखमा पोत्देला ! ब्लग पनि त्यस्तै हो । एउटा खाली पानाको स्थान हो । त्यसमा के भर्ने भन्ने कुरा प्रयोगकर्ताको आफ्नो विचार हो । त्यसैले नागरिक पत्रकारिता भनिनु भनेको पत्रकारिताको चस्माले मात्र हेरिनु हो । एउटा खाली पानामा जे पनि कोरिन सक्छ ।
तपाई त भुकम्प सम्बन्धी काम पनि गर्नु हुन्छ , बैशाख १२ गते गएको भुकम्पपछि उद्दारमा नि खटिनुभयो, ति अनुभवहरुलाई पनि ब्लगमा समेट्नु भएको छ कि?
मेरो यो ब्लग नितान्त ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरेकी छु । काम सम्बन्धी अनुभवहरु पनि लेखेकी छु, जुन अफिसको आधिकारिक पेज र वेवसाइटमा सेयर गर्ने गरिन्छ ।
यत्तिका कुराहरु राख्ने मौका पाइयो, धन्यवाद मेरोरिपोर्टलाई । साथै मेरोरिपोर्टले सामाजिक संजालमा हुने देख्ने गरेका विकृतिहरुलाई न्युनीकरण गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छ त्यसतर्फको सक्रियतामा निरन्तरता रहोस् । सोसल मिडिया मात्र नभै ब्लगिङ तर्फ पनि महिला सहभागिता कतिको बढाउन सकिन्छ त्यसको लागि मेरोरिपोर्टले सक्दो भुमिका खेलोस् ।
Comment by Prakash Lamichhane on September 10, 2015 at 9:36am
बधाई छ पवि धेरै धेरै । :)
Comment by Binaya Shekhar on September 9, 2015 at 9:23pm
लाै बधाई छ ।